यश दास गुप्ताको कारण नुसरत जहाँको घर ध्वस्त भयो? पूरा प्रेम कहानी चर्चामा चर्चा – www.agnijwala.com
यश दास गुप्ताको कारण नुसरत जहाँको घर ध्वस्त भयो? पूरा प्रेम कहानी चर्चामा चर्चा
बंगाली अभिनेत्री र टीएमसी सांसद नुसरत जहान आफ्नो गर्भावस्था र पति निखिल जैनसँग सम्बन्ध बिगार्दा खबरमा छन। उनको बयान जुन माथिबाट आयो त्यसले मान्छेहरूको होश उडाउँदैछ। उनीहरूको विवाहलाई अवैध भनेर वर्णन गर्दै उनले भने कि उनलाई सम्बन्धविच्छेदको आवश्यकता पर्दैन। यसैबीच, अब नुसरत जहानको अनुहार पनि खबरमा आउँदैछ। नुसरत जहांको नाम अभिनेता यश दास गुप्तासँग सम्बन्धित छ। हामी तपाईंलाई बताउँछौं यश दास गुप्ता को हुन्।
यश दास गुप्ता एक लोकप्रिय अभिनेता हो।
यश दास गुप्ता लोकप्रिय अभिनेता हो
यश दास गुप्ता बंगाल फिल्म उद्योग को एक लोकप्रिय अभिनेता हो। यस बर्षमा सम्पन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा यशदास बीजेपीमा सामेल भए। साथै, उनले चुनाव पनि लडे तर उनी चुनाव गुमाए।
नुसरत जहाँ सम्बन्धित यश दासको बयान
यश दास गुप्ता र नुसरत जहान
चुनावमा यश दासको नाम नुसरत जहानसँग सम्बन्धित थियो। यश दास गुप्ता र नुसरतसँग राजस्थान जाने कुरा जब प्रकाशमा आयो तब यो कुरा झनै चर्को भयो। यस्तो अवस्थामा, मानिसहरूले भन्न थाले कि नुसरत यशदसलाई डेट गर्दैछन्।